“Tsy tian’i Dada hiresaka amin’ny ankizilahy izaho sy ny zandriko vavy. Raha manao izany izahay, dia tsy maintsy amin’ny telefaonina ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny, ary tokony hisy olon-kafa eo.”—Lenore.
“Mety haharay SMS na sary tsy tianao ianao raha tsy tandremanao tsara hoe iza avy no homenao ny nomeraonao.”—Scott.
“Ho mora miraiki-po ny ankizilahy sy ankizivavy mifandefa SMS matetika.”—Steven.
Tena nisy: “Nana-namana ankizilahy iray izay aho, ary nifandefa SMS foana izahay. Nihevitra aho hoe mpinamana be fotsiny izahay. Nilaza tamiko anefa izy fa tia ahy, ka izay vao tsapako hoe tsy nety ny nataonay. Rehefa mandinika ny lasa aho, dia hitako hoe tsy tokony ho niaraka be sy nandefa SMS taminy foana aho.”—Melinda.
“Tsy ahafantarana ny fihetseham-po sy ny toe-peo ny SMS, na dia misy kisarisary aza miaraka aminy. Mety ho diso fandray an’ilay hafatra ny olona.”—Briana.
“Lasa ratsy laza sy malaza ho mpanadala ankizilahy ny ankizivavy sasany, noho ny zavatra nosoratany tamin’ny SMS ho an’ny ankizilahy.”—Laura.
“Tsy mety ny ataoko indraindray, satria mbola miresaka amin’olona aho na eo am-pisakafoana nefa mandefa SMS.”—Allison.
“Mampidi-doza ny mandefa na mamaky SMS rehefa mitondra fiara. Mety hiharan-doza ianao raha tsy mifantoka amin’ny lalana.”—Anne.
;-) Ankatoavy izay lazain’ny ray aman-dreninao.—Kolosianina 3:20.
“Efa atokisan’i Dada sy Neny aho amin’ny fampiasana finday. Fantany hoe fidiko tsara ny nomeraon’olona ampidiriko ao.”—Briana.
“Alazao amin’ny ray aman-dreninao izay olona mandefa sary vetaveta aminao. Ho voaro ianao amin’izay sady ho lasa atokisan’izy ireo.”—Sirvan.
“Misy zavatra tsy ataoko mihitsy, ohatra hoe ny mandefa SMS rehefa miaraka amin’ny namako, raha tsy hoe tena ilaina ilay izy. Tsy omeko olona tsy mifankazatra amiko koa ny nomeraoko.”—Janelly.
Valiny mety: B. Raha tsy hoe misy antony tsy azo anoarana, dia tsara kokoa raha resahina mivantana ny zava-dehibe toy ny hoe hisaraka amin’ny olona iray.—Lioka 6:31.
Valiny mety: A. Samy tsy manana ny hajany intsony na ny mandefa na ny mijery sary vetaveta. Aza mandray anjara amin’izany!—Efesianina 5:3, 4.
Valiny mety: B. Afaka miandry ilay SMS. Zava-dehibe kokoa noho ilay izy ny fianakavianao.—Filipianina 1:10.